चिचिला ३ सौरे : पुस्ता वित्यो तर विकास पुगेन « Emakalu Online
चिचिला ३ सौरे : पुस्ता वित्यो तर विकास पुगेन
संखुवासभा । मानिसलाई चाहिने विकासका आधारहरु आवश्यकता अनुसार थोर बहुत रुपमा पुगेकै हुन्छ । जबकी भूगोल र बस्ती अनुसार त्यहाँको सम्भावना अनुसार विकासको अघि बढेको हुन्छ । तर पुस्तौं बित्दा समेत विकासको अनुभुति नै गर्न पाएका छैनन् संखुवासभाका एक गाउँका स्थानीयले ।
संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित सौरे गाउँ भूगोलको हिसाबले जति विकट छ त्यतिनै पछी छ विकासको गति । करिब ९ घर बसोबास रहेको सौरेबासीलाई देशले नागरिकता मात्रै दिएको छ । यसका बदला उनीहरुले दुर्गम बस्तीमा भोगी रहेको कष्टकर जीवन मात्रै छ । स्थानीय फुलमाया राई भन्छन् गाउँमा जान्ने बुझ्ने न भएकाले होला हामी सँधै हेपिन्छौं ।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारामा शुसज्जित भूगोल भित्रबाट सौरे गाउँले सरकारको एकस्वर बनेको नारालाई नै गिज्याईरहेको छ । उनीहरुका लागि भनेर विकासका आधारभुत आवश्यकताहरु कहिल्यै यहाँसम्म आइपुग्न सकेन । बरु सौरेमा आएका योजनालाई टाठाबाठाहरुले अन्तै सारिदिए । सौरे गाउँ प्रबेश गरेर डाँडा गाउँमा लैजाने भनीएको सडक पारी बाटै वडा नं. २ लेगेको दिवस राईको गुनासो छ । तर हामीले पटकपटक मागेको विकास पनि अरुले नै खोसिदिए, उनी भन्छन् ।
उनीहरुका आकांक्षा पनि धेरै छैन । बस्ः खानेपानी, विद्युत र सडक मात्रै पुगे उनीहरुले सुखको श्वास फेर्ने छन् । यो बस्ती बस्न थाले यता, यो गाउँमा करिब दुई दशक अघि ९ घरको लागि खानेपानी योजना आयो । तर २० वर्ष अघि घरसम्म पुगेको पानीको धारो अहिले २० ठाउँ मै चुहिएको छ । त्यसयता योजना माग गर्दा निवेदनमा लागेका मसी र कागज मात्रै खेर गइरहेको सन्त बहादुर राईले भने । उनै सन्त बहादुरको पहलमा २० वर्ष अघि खानेपानीय योजना यहाँ आएको थियो । शरिर पाको भएपछी कार्यालयसम्म धाउन समस्या भएपछी योजनाको लागि पत्याउनै छाडेको उनी दुखेसो पोख्छन् ।
गाउँसम्म आएको सिंहदरबारले गाउँको विकास गर्छन् भन्ने उनीहरुमा आशा थियो । सौरे गाउँलाई विकासको मुलधारमा पु¥याउँछु भनेर निर्वाचनमा होमिएकाहरुको ठूलै स्वर थियो । तर चार वर्ष वितिसक्दासम्म निर्वाचनमा हार व्यहोरेकाहरुको त कुरै छाडौं जितेकाहरु समेत झुल्किन सकेका छैनन् ।